Wasaaradda Waxbarashadda Somaliland oo iska Fogeeyey Eedayn Deeqo Waxbarasho oo Lagu soo eedeeyey – WARSOOR
Haegeysa – (warsoor) – wasaaradda waxbarashadda Somaliland ayaa khamiistii jawaab ka bixisay eedayn loo soo jeediyey ee la xidhiidhay deeq waxbarasho oo dawladda itoobiya ugu deeqday Somaliland.
Wasiirka Waxbarashadd Somaliland Md. Yaasiin Xaaji Maxamud Faaratoon oo shir jaraaid ku qabtay xafiiskiisa ayaa sheegay in wararka la sheegayaa ay been abuur yihiin, wasaaradiisuna ay si fiican ugu qaybisay goboladda dalka.
Wasaaradda Somaliland ayaa deeq waxbarasho.oo dhan 300 oo arday ka heshay dawladda Itoobiya. Kuwaasi oo isugu jiray dedgree 1aad iyo 2aad.
Balse qaar ka mid ah dadkii aan nasiibka u helin deeqdaa waxbarashai ayaa eedaymo u soo jeediyey wasaaradda waxbarashadda.
Halkan ka daawo waxay ugu jawaabtay: